Kourtney Kardashian ရဲ့ ချစ်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့ David Dee Duron နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်။ – SoShwe
Home/Entertainment/Kourtney Kardashian ရဲ့ ချစ်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့ David Dee Duron နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်။
Kourtney Kardashian ရဲ့ ချစ်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့ David Dee Duron နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်။
Kourtney Kardashian ဟာ အရပ်မြင့်မြင့် ဆံပင်အညိုရောင်ရှိတဲ့ ချစ်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့ David Dee Duron နဲ့အတူ ဇန်နဝါရီ ၂၄ရက် ကြသပတေးနေ့က Malibu မှာရှိတဲ့ Nobu စားသောက်ဆိုင်မှာ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ညစာစားနေခဲ့တာကို Keeping Up with Kardashian TV အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Kourtney က ” David ဟာ စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူရည်မွန်လေးပါ။ သူက ဘောလုံးကို ဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီး မိသားစုနဲ့အတူ အချိန်ကုန်တတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ညီအစ်ကိုတွေထဲမှာတော့ David က အလုပ်အကြိုးစားဆုံးပါပဲ။ သူ့လောက်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့သူမျိုး ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး . . .” ဟုဆိုကာ David ကို ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
David နဲ့ ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်တဲ့ အချက် ၅ချက်ကတော့
၁။ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကထဲက မဟုတ်တဲ့ Kourtney Kardashian ရဲ့ ရည်းစားအသစ် Davidဟာ အမေရိကန်တောင်ပိုင်း Louisiana ရဲ့ Shreveport ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။
၂။ David ဟာ Miami က ကားစုဆောင်းရေးဌာနမှာ CPAတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Davidက မြင်းစီးရတာ ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် သူရဲ့အင်စတာဂရမ်စာမျက်နှာမှာ မြင်းတွေနဲ့ပုံကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ မိသားစုဝင်တွေများတဲ့ မိသားစုကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ David မှာဆိုရင်တော့ Dez, Denny, Dakota, Dawn and Destiny လို့ အမည်ရှိတဲ့ မောင်နှမ ၅ ယောက်တောင်ရှိပါတယ်။
၅။ David ဟာ Kardashian တို့လောက် မကျော်ကြားသေးပေမယ့် သူတက်ခဲ့တဲ့ ဖလော်ရီဒါက Lakeland တက္ကသိုလ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြသနာတစ်ခုကြောင့် လူသိများခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ David က သူရဲ့ အင်စတာဂရမ် စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း ” ကျွန်တော့်ရဲ့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကတော့ တကယ့်နှစ်ပါပဲ။ ဒီတက္ကသိုလ်ကိုရော သူငယ်ချင်းတွေကိုရော ချစ်တယ်။ ဒီမှာရှိရတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ Billboardရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကျွန်တော့အကြောင်းကို ထည့်ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ . . .” လို့လည်း ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။
Previous Game of Thrones ထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cersei Lannister အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ Lena Headey
Next ???????????????? ???????? Harry ??? ???????????????????????? Meghan ?????? ???????????????? ???????????????????????????